J: February 2008
Health - Warning Vitamine E
Warning over supplements as survey suggests vitamin E could cause up to 27 per cent increase in lung cancer
ဗိုက်တာမင် အီး သည် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာဖြစ်ရန် ၂၇% ရှိပါကြောင်းစာဖတ်သူများအား သတိပေးနိုးဆော်ရပါသည်
Fashion - Diamonds are FOREVER!
ကဲ ကဲ ကဲ ညီမလေးတို့ က ပူဆာလွန်းတော့ လည်း....
စိန်တုံးကြီးမှာ တန်ဖိုးတွက်နေတုန်းဖြစ်ပါသည်။ (သတင်းစာပျောက်သွားလို့ ပြန်ရှာနေတယ်။ ဈေးမသိတော့ဘူး။ ဟောင်ကောင်မှာ လေလံတင်မယ်လို့ ပြောတာဘဲ)
Technology - Fastest car
ကားလေးက လှလိုက်တာ လိုချင်တယ် ဈေးမတတ်နိုင်လို့သိုလာခဲ့တယ် ကမ္ဘာမှာ အမြန်ဆုံးကားဆိုဘဲ နောက်နေ့ မှ အသေးစိတ်ရေးမယ် ခုတော့ ကားလေးကို ငေးလိုက်အုန်း
အစကမရေးတော့ဘူးလုပ်နေတာ ကိုချိုင်ယွန်က ပို့ အသစ်လာချောင်းတာ လို့ပြောလို့ဒီပို့ လေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဓါတ်ပုံထဲက ကားကို ဖက်ထားတာ ဂျေမဟုတ်ပါကြောင်း၊ မော်ဒယ် ဒရိုင်ဘာ ဖြစ်ပါကြောင်း အတိအလင်း ကြေငြာပါသည်။
(အနော် က ပိုချောတယ် တိရား)
Art - Answer
ပျောက် ခြင်း၏ လျို့ ဝှက်ချက်
Miss Desiree Palmen ၄၄နစ် အမည်ရှိ ဒတ်ခ်ျ အနုပညာရှင်သည် အ၀တ်လူရုပ်ကို နောက်ခံ ရှုခင်း ပုံစံအတိုင့်း လိုက်ညီအောင် ဆေးခြယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်သော အခါ အ၀တ်ရုပ်သည် နောက်ခံပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေသဖြင့် အရိပ်လို လို မြင်နေရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
လာရောက်ကြည့်ရှု့ လေ့လာသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Art - Lost
အသေချာကြည့်ပါ ပုံထဲတွင် ပျောက်နေသလဲ ပုံတိုင်းတွင် လျို့ ဝှက်ချက်ရှိသည်
Animal - What is inside the fridge?
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဘာရှိသလဲ (ပုံကို ကလစ်လုပ်ပြီး ပုံကြီးချဲ့ ကြည့်ပါရန်)
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးတဲ့ ဒဏ်ကို သိသိ သာသာကြီး ခံစား ရတာ ကတော့ တိရိစ္ဆာန်လေး တွေပါဘဲ။ ဆောင်းဦး ကစပြီး ၃လလောက် အိပ်နေတဲ့ အကောင်လေး တွေဟာ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု့ကြောင့် ဆောင်းတွင်း ထဲမှာ လန့် နိုးလာကြပါတယ်။ ဆောင်းတွင်း ဖြစ်လို့အစာရေစာရှားတာနဲ့ ၊ ရာသီဥတုက ပူရာမှ ပြန်အေး လိုက် ဖြစ်တာနဲ့ သေဆုံး ကုန်ကြတဲ့ အတွက် wild life အတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။
လိပ်ကလေးတွေ အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အပူချိန် ၃-၉ ဒီဂရီအတွင်းမှာ တသမတ်ထဲရှိမှ ဖြစ်မှာမို့ 
လိပ်ပိုင်ရှင် အဖွားကြီးက သူမရဲ့ လိပ်ကလေးတွေ အကောင် ၇၉ကောင် ခန့်ကို ရေခဲသေတ္တာ ထဲထဲ့ ထားပါတယ်။
ပုံကို ကလစ်လုပ်ပါက လိပ်ကလေးများ ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်နေသည်ကို အသေအချာမြင်ရမည်
News - Reply mail from The Queen
အညတရအတွက် နေမ၀င်နိုင်ငံ ဘုရင်မ ရဲ့ ပြန်စာ
နိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲ ဟာ သမာတမတ် ရှိရပါမယ် ဒါမှလဲ သူ့ ရဲ့ ဘုန်းတံခိုးကြီးသလို ပြည်သူပြည်သားတွေ လေးစားပြီး နိုင်ငံဟာ သာယာဝပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် စတာလင်ပေါင်ဟာ အခိုင်မာဆုံး ဖြစ်သလို သူ့ ရဲ့ ဘုရင်သက်တမ်းဟာ ရှည်လျားလွန်းသလို တန်ခိုးအာဏာဟာ ကမ္ဘာတပတ် ပတ်နိုင်အောင် နေမ၀င်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
အသေးမွှားဆုံးကိစ္စကလေး တခုကို အံ့မခန်းပြောပြချင်ပါတယ်။ Cornwall မြို့ ရဲ့ ပန်းခြံမှာ ၆နစ်အရွယ် ကလေးမလေး Elishia Stevenson မှာ ဘဲငန်းလိုက်ကိုက်ခြင်း ခံရပါတယ်။ ဘဲငန်းဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း ခြံစောင့်လို အားကိုးရတဲ့ စစ်သူကြီးလို့ တောင် ဆိုနိုင်တယ်။ ကလေးမ ကလေးက အရမ်း ၀မ်းနဲပြီး မကျေမနပ်နဲ့သူ့ အမေကို ဘဲငန်းပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလဲလို့ မေးပါတယ်။ ၃၆နစ်အရွယ် Rachael က တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဘဲငန်းတွေကို ဘုရင်မက ပိုင်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ တိုင်းပြည်ကို ပိုင်တဲ့ ဘုရင်မဆိုတော့ သီးသန့် မွေးတဲ့ အကောင်တွေက လွဲရင် ဘယ်အရာ မဆို ဘုရင်မ အဲလစ်စဘက် ပိုင်တာပေ့ါ။
ဒါနဲ့ ကလေးမကလေးက သူ့ ကိုဘဲငန်းကိုက်တဲ့ပုံလေး ဆွဲပြီး ၀မ်းနဲရတဲ့ အဖြစ်ပျက် အကြောင်းစုံရေး လိုက်ပါတယ်။ သို ၊့ဘုရင်မ၊ ဘတ်ကင်ဟန် နန်းတော် လို့ လိပ်စာတပ်ပြီး စာပို့ လိုက်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာဘဲ နန်းတော်က စာပြန်လာပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးက ၀မ်းနဲ ပါကြောင်း တောင်းပန်စာ ဖြစ်နေပါတယ်။
It said: 'The Queen thought it kind of you to write – and was sorry to hear about the swan.'
စာမှီး Friday, February 22, 2008 မက်ထရို ယူကေ
Animal - Accident ခွေးသတိပြု
လူတဦးလမ်းသွားရင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာ မဆန်းပါဘူး။ ခလုတ်တိုက်လို့ လဲတာ။ သဘာဝရေလေမိုးဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်တာ၊ မတော်တဆ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှ မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်တာတွေ ကတော့ ကံဆိုးလို့ ဘဲ သတ်မှတ်ရမှာပါဘဲ။
သွားရင်းလာရင်း လူဆိုးတွေ ၀ိုင်းရိုက်တာ ခွေးကိုက်ခံရတာတွေ ကတော့ မကောင်းတဲ့ ထိခိုက်မှုပေါ့၊ လူကောင်းဆိုတာ သူများကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်ပါဘူး။ လူဆိုးဆိုတာ ဆိုးလို့ မကောင်းလို့ သာ ကောင်းတဲ့သူကို လိုက်ထိခိုက်တာ ခွေးဆိုတာလဲ ရူးလာရင်တောင်၎င်း၊ ဆိုးတဲ့ဗွေပါလာရင်တောင်၎င်း၊ လူကောင်းကို ကိုက်တာ ပါ။ လူဆိုတော့ မကောင်းတဲ့ အရာကို ရှောင်ဖို့ ဘဲလိုတာကိုး ။ မရှောင်နိုင်တဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း အော် ကံဆိုးလို့ ဘဲ ပြောရမှာပေ့ါလေ။ ဘယ်သူက ရော ခွေးအကိုက်ခံချင်လို့သွားမလဲ၊ ခွေးကိုရော သွားစ မလား။
အင်္ဂလန် မြောက်ပိုင်းမှာ နေရာ တော်တော်များများမှာ အပြစ်မဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ မဆီမဆိုင် အကြောင်းမဲ့ သက်သက် ရိုက်နက် သတ်သွားတာ။ ကားကြိတ်သတ်တာ။ ဓါးထိုးသတ်တာ၊ သေနပ်ပစ်သတ်သွားတာ တွေ တပတ်မှာ ၂ခါလောက် ရှိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃လက အသက် ၁နစ်ခွဲရှိတဲ့ ကလေးလေးက အဖွားအိမ်သွားရင် အဖွားရဲ့ ခွေးကို အိမ်ပြင်မှာ ထားတယ်။ အိမ်အပြင်က အေးတော့ ခွေးက အညိုးနဲ့ဒီကလေးကို ညိုးနေတယ်။ တရက် အိမ်ဖော်က အပြင်မှာ ထားထားတဲ့ ခွေးကို အိမ်ထဲသွင်းလို့အခွင့်ရတာနဲ့ အဲဒီခွေးက ကလေးလေးကို ကိုက်သတ်ခဲ့တယ်။
ဘုရင်မကြီးရဲ့ သွားလေရာ လိုက်ပါနေရတဲ့ အချစ်တော် ခွေးပုလေးဆိုရင် ဘုရင်မ ညီမတော်ရဲ့ ခွေးက ကိုက်သတ်လိုက်တာ။ (အဲဒီခွေး ပြန်အသတ်ခံရလားမသိဘူး။)
ဒီမှာ ခွေးတွေ က အလွန်အားသန်တယ်။ ခွေးမျိုးကလည်း စုံတယ်။ တချို့ ဆို ခြံထဲက ထိန်းထားတာတောင် လွတ်ထွက်ပြီး လမ်းသွားတဲ့ ကလေးတွေ ကိုက်သတ်တာ အနဲဆုံး ၂လမှာ တခါနီးပါး တော့ ဖြစ်တတ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကျတော့ ပိုဆိုးတာက ကိုယ့် မွေးထားတဲ့ ခွေးက သေအောင် ကိုက်သတ်တာ ဟောဒီမှာ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ အသက်၅၀ ရှိတဲ့ လူတဦးဟာ သူ့ ခွေး က သူ့ ကိုသေအောင် ကိုက်သတ်တဲ့ သတင်းပါလာလို့ ဒီပို့ စ်ကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ခွေးနှင့်ဝေးဝေး ရှောင်သင့်သည် လို့ ဘဲ အကြံပေးရမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒီအဖြစ်လေးက တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာ ၁၀၀% အမြဲ မကောင်းနိုင် ဘူးလို့ ပြောသလိုဘဲ။ သစ္စာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ ကြုံရင် ခွေးမွေးသူ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဘလော့လည်ထွက်ရင်း ..... ခွေးကိုက်ခံရ ဘူးပါသည်။
ဘလော့ လမ်းပေါ် လျှောက်သွားရင် ခွေးသတိပြု ကြပါ။
News - Pls vote New little Beatles
Who can crown king of Beatles ? Paul Macarny or little boy?
Fashion - For you boy! WhileGold Diamond Toy Car
ကဲ ဘလော့ကာညီနောင်များအတွက် ပေါင်၁သိန်း၅ထောင်တန် ကော့ညက်...
ဘလော့ကာညီအမများအတွက် ပေါင်၁သန်းတန် စိန်အိတ်...
အခု သားသားလေးတို့ အတွက် ကစားစရာ ရွှေဖြူနဲ့ပြာလဲ့လဲ့ စိန်စီထားတဲ့ ကား ရော့ ပေါင် ၇သောင်း၂ထောင် တန် တဲ့ ကား ..
The miniature motor is cast in 18-carat white gold and decked out in more than 2,700 blue diamonds.
A spokesman from Mattel, who owns Hot Wheels, said: "This car is the most expensive toy car we have ever made."
The valuable vehicle was unveiled by former Newlyweds star and singer Nick Lachey at the 105th American International Toy Fair.
General - Why Spice girl is ENDed!
စပိုက်ဂဲ အကြောင်း မလေ့လာခဲ့လို့ ဘာ့ကြောင့်အဖွဲ့ ဖျက်ခဲ့တယ် ဆိုတာမသိပါဘူး။ အဖွဲ့ ကွဲပြီး ၁၀နစ်အတွင်းမှာ အဖွဲ့ သားတွေ တဦးချင်းစီက အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီအတွင်းမှာ ဗစ်တိုရီးယားက သန်းကြွယ်သူဌေးဘောလုံးသမားနဲ့ ရတော့ သူတို့ လင်မယား၂ဦးစလုံး နေရာပေး ခြင်းခံရပါတယ်။
အဖွဲ့ ဖြစ်ရေးအတွက် ဗစ်တိုရီးယားက အတော် စည်းရုံးသလို ထင်မိပါတယ်။ အဖွဲ့ ပြန်ပေါင်းတုန်းက မဲလ် စီ က ပြန်မပေါင်းချင်ဘူး ပြောခဲ့ပါတယ်။
စပိုက်ဂဲ ပြန်ဖွဲ့တော့ ပရိသတ်က အတော်ကို အားပေးကြ ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ စာရေးသူ အမြင်ကို ပြောရရင်.... ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး..
၁. အ၀တ်အစား - အဖွဲ့ သား၅ယောက်စလုံးကို အ၀တ်အစားချုပ်ပေးတဲ့သူ က ဗစ်တိုရီးယားရဲ့ အ၀တ်အစားကိုသာ အထူး ပေါ်လွင်လှပအောင် ထွင်ပေးပြီး ကျန်သူတွေ ရဲ့ စတိုင်ဟာ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကလို ပုံစံ၊ အရန် အဆိုတော်လိုမျိုးပုံစံ၊ အရောင်မှိန်မှိန် ပုံစံမကျ ချုပ်တာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဗစ်တိုရီးယားနဲ့င်္အကျီဒီဇိုင်း ပိုင်ရှင် အလွန်ရင်းနှီးတယ်လို့သတင်းစာတွေ ထဲမှာ ဆိုပါတယ်။
၂. သီချင်း ဆိုသူ - ဗစ်တိုရီးယားက လွဲရင် ကျန်သူတွေ အားလုံး အသံအောင်မြင်သလို တကယ်ကို ဦးဆောင်ဆိုတာတွေ့ ရ ပါတယ် သူဟာ နောက်လိုက် သံယောင်ပေးဘ၀ ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ ကံ ကောင်းလွန်းတော့ သန်းကြွယ်သူဌေးနဲ့ ရသလို ဖက်ရှင်တွေ မှာလဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ အတူ ပရိသတ်က သူ ရဲ့ စတိုင်နဲ့ အ၀တ်အစားလှလွန်းလို့သူ့ ကိုဘဲ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ အသံက မကောင်းပါဘူး။ ဆိုလဲ မဆိုနိုင်တာ ကြားသိရပါတယ်။
၃. အရှေ့ ထွက်သူ - သီချင်းတိုင်းမှာ ဗစ်တိုရီးယားက သံယောင်လိုက်သူ ဖြစ်သော်လည်း စင်ပေါ်မှာ သူ က အားလုံးရဲ့ အရှေ့ ပို ထွက်ပြီး ဟန်ရေး ပြနေသလို သူ့ ကိုဘဲ ပရိသတ်က အားပေးတာ တွေ့ ရပါတယ်။
၄. စည်းကမ်းဖောက်သူ - အဖွဲ့ သားတွေ သီချင်းဆိုရင် ယိမ်းတိုက်သလို လုပ်ရမယ် ဆိုပေမဲ့ ဗစ်တိုရီးယားက စည်းကမ်းဖောက် ပါတယ်။ ဥပမာ ခေါင်းမြှီးခြုံ အနွေးထည် ၀တ်ကြတဲ့ အခါ သူက ခေါင်းမခြုံဘဲ ဖော်ထားပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ဆံပင် စတိုင်ပျက်မှာ စိုးလို့ စတိုင်ပေးလွန်းတာ တွေ့ ရပါတယ်။ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၅. မောက်မာသူ - အဖွဲ့ ဖွဲ့ ပြီဆိုရင် အချင်းချင်း အားလုံး ညီညွှတ်ရပါမယ်။ ကူညီဖေးမရပါမယ်။ တကယ်ဆို ဂါရီဟာ နံမည် အထွက်ဆုံးပါ။ သူသီချင်းဆိုရင် အားနဲ့ မာန်နဲ့ ဆိုတဲ့ အတွက် ဖျော်ဖြေရင်း တောင် ချော်လဲခဲ့ပါတယ်။ သူ့ မှာ အဖွဲ့ ထဲက အရင်ဆုံးထွက်ခဲ့သလို အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို ဗစ်တိုရီးယားက တီဗွီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဂါရီက ယောက်ျားတယောက်တောင် ကိုယ့်ကို ကပ်အောင် မထိန်းနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ခဲ့ပါတယ်။ မဖေးမဘဲ သူသိရှင်ကြား စော်ကားတာပါဘဲ။ ဒါဟာ အတော် မောက်မာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
၆. တကယ့်အဆိုတော် - သီချင်းတွေ အားလုံးပြန်ကြည့်ရင် မဲလ် စီ (စပေါ့တီ)၊ မဲလ် ဘီ(စကယ်ရီ)၊ ဂါရီ (ဂျင်းဂျာ)နဲ့အယ်မာ(ဘေဘီ) စပိုက်တွေက သီချင်းကို အဓိက ဦးဆောင် ဆိုပြီး သူတို့ ရဲ့ နေရာ ဟာ အရန်လို နေရာမှာ ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
သီချင်းဆိုပြီးတိုင်း စင်အနောက်ဘက်ရောက်တာနဲ့အားလုံးက ဒေါသဖြစ်ကြ ရန်ဖြစ်ကြတာ သတင်းစာတွေထဲမှာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (စပေါ့တီ၊ စကယ်ရီ၊ ဂျင်းဂျာ နဲ့ဘေဘီ စပိုက်) ၄ယောက်သာစုပြီး စပိုက်ဂဲ ပြန်ဖွဲ့ ရင် အလွန်အောင်မြင်မှာဘဲလို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုသလို တကယ် အရည်ချင်းရှိတဲ့ သူတွေပါ။ အဖွဲ့ ကွဲတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါက စာရေးသူရဲ့အမြင်ပါ။
News - Don't move
ဟိတ် မလှုပ်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ
ခွေးကလေးမှာ ဆိုဖာပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ်ပြီး မိုးပေါ်ထောင်နေသော ခြေထောက် လေးချောင်း ပေါ်တွင် ဒိန်ချဉ်ခွက် ကလေးများ တင်ထားရာ ဟန်ချက်ညီစွာ အချိန် အတော်ကြာအောင် ငြိမ်သက်စွာ နေနိုင်သည်ကို တွေ့ ရပါသည် သူ ၏ ကျန်သော ဓါတ်ပုံ၂ပုံမှာ ကောင်းမွန်လှသော ပုံဖြစ်သော်လည်း ပို့ပေါ်တင်ရာတွင် မရသောကြောင့် နောက်ပိုင်း scan ဆွဲတင်ဖြစ်နိုင်ပါက တင်ပါမည်။ သို့ သော် အာမ မခံနိုင်ပါ။
သူ့ အလှ Miss Transvestite Contest 2005 (Thailand)
မိန်းမဘ၀ပြောင်းထားတဲ့ ယောက်ျားလေး တယောက်ပါ. ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံး မိန်းမဘ၀ ပြောင်းထားသော ယောက်ျားလေးများဖြစ်ပါသည်။
Technology - Matches Car
ခိုင်ခန့် တယ် လှသလားမမေးနဲ့ဖော်မြူလာဝမ်းကား ကားမှန်ကို ညှိလို့ရတယ် ကားဘီးဖြုတ်တပ်လို့ ရတယ်....
အချောင်းရေ ၉၅၆၀၀၀တိတိ ရှိတဲ့ မီးခြစ်ဆံလေး များနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကား
Fashion - Are you 69 Raquel Welch ?
Guess how old is she? (စာမှီး ဒေးလီးမေးလ်)
၆၉နစ် ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ရွယ်ကွာဝှက် ? ? ?
Health - 120 yrs old goodies
ကမ္လ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး အသက် ၁၂၀နစ်ရှိ အဖွားမှာ ...
The world's oldest woman has been discovered living in an Arab village in northern Israel.
A sprightly 120 years old, Mariam Amash rises every morning at 5am, walks unaided, and attributes her longevity toadiet rich in vegetables.
Technology - Colour ဆေးရောင်ခြယ်ကြရအောင်
ပန်းဂေါ်ဖီကို တကယ့် ပန်းလေးတွေလို လှပအောင် သိပ္ပံပညာရှင်များက အဖြူရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နဲ့အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါပြီ။
ဘယ်လင်တိုင်းအမှီ ဆုတောင်းဖို့ပို့ စ်နဲ့ နိုးဆော်ခဲ့ပြီးပြီ
အခု ဘယ်လင် လဲ တိုင်း ပြီးပြီ ဆိုတော့ ....
ဂြိုလ်တုကြီးကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစား နေပြီ
Wish - Valentine Day Wish
ချစ်သူများနေ့ မှာ ချစ်တဲ့သူတိုင်း စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
ချစ်တိုင်းညားရ်ျ ညားတိုင်း ချစ်ကြပါစေ။
General - Disappear ပျောက်နေသည်
စာရေးသူသည် နံမည်ဂျီး ပျောက်စေဆြာဂျီး ဒေါ်ချိုငယ်ဦး ထံ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဆေးကုသရန် သွားခဲ့သည်။ ပျောက်စေဆြာဂျီးသည် ပျောက်နေပါသောကြောင့် သူ ၏ ဆီပုံးထဲတွင်တ၀ဲလည်လည် လက်တို မျက်စိညောင်း သွားပါသော်လည်း ၂ရက်ခန့် အကြာမျှ မမြင်ရ အသံမကြားရပါ။ ပျောက်စေဆြာဂျီး ပျောက်နေသည်မှာ မဆန်းပါ။
ယခု စာရေးသူ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကို ရိပ်စား မိသော ဆြာကိုစိုးထက်မှာ သူ ၏ သာယာဌာနေ ဘလော့မြေမှ တယ်လီပတီနည်းဖြင့် စာရေးသူ အား ကျန်းမာရေး ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးစစ်ဆေး ဆေးစစ် သည့်အခါ (ခြေဆုံးတွင် ခြေသည်းရှည် နေသည် ကို၎င်း၊ ခေါင်းဆုံးငယ်ထိပ်တွင် ဆံပင်ငွေရောင် ရွှေရောင် တောက်ပ နေသည်ကို ၄င်း) အသက် အန္တရယ် စိုးရိမ်ရသည် ကို တွေ့ ရှိသွားပါသည်။
ထို့ အတွက်ကြောင့် စာရေးသူအား ဆေးအညွှန်းရေးပေးလိုက်သဖြင့် ၀မ်းသာအားရ ဆေးခန်းမှ အပြန် ဆေးစာ ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်သော အခါ...
၈ပါးသီလယူရမည်..... အပိုပစ္စည်း လျော့ချရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ညညမအိပ်နိုင်မှု့ လျော့ပါးစေခြင်း အသက် ရှည်နိုင်စေခြင်း ကျန်းမာရေး အားကောင်းစေခြင်း ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် လျော့ချစေခြင်း လူပေ့ါပါးစေခြင်း အလို့ ငှာ ညစာမစားဘဲ ကုသိုလ်ပိုရစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ လောလောဆယ် စာရေးသူ မှာ အပိုပစ္စည်း (အဆီ) လျော့ချရန် ကြိုးစားနေရ ပါသည်။
ထို့ အတွက်ကြောင့် အခြေအနေမှာ ရှုပ်ထွေးပြီး လွန်စွာ စိုးရိမ်နေရပါသည်။
ခွင့်လွှတ်ပါ အခုတလော ကျန်းမာရေး ကြောင့် ဘလော့တကာ လိုက်လည်ခြင်းနဲပါးရသဖြင့် မျက်တော် မရှ ကြပါနှင့်... မြှားနတ်မောင် အေဂျင်ဆီမှာ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါမည် ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား အသိပေးအပ်ရပါသည်။
မေတ္တာဖြင့် လာရောက်အားပေးကြသော ဘလော့ကာ မောင်နှမများအား လွန်စွာ ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ စာရေးသူ ဘလော့ရေးခြင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာလိုခြင်း၊ စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှု့ လျော့ပါးလိုခြင်း၊ ဗဟုသုတ ဝေငှလိုခြင်း၊ မိတ်ဆွေပေါများလိုခြင်း၊ ပျော်ရွှင်လိုခြင်း အတွက်ကြောင့်သာရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့စာရေးသူ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်တွင် လာရောက် အားပေးသော စာများကြောင့် စာရေးသူ လွန်စွာစိတ်ကြည်နုးရပါသည်။ ထိုစာသားလေးများမှာ အဓိက အားဆေးဖြစ်ပါသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက် အကူ ဖြစ်ရပါသည်။
အလျင်းသင့်သလို သတင်းထူးများ သိသင့်သည်များကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ရပါသည်။
New year wish - extension
တရုတ်နစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း နောက်ဆက်တွဲ
အမ်... တချို့ က ဆုတောင်းတာ နဲလို့အိမ်ထောင်ရေးပါ ထဲ့ဆုတောင်းပေးဆိုဘဲ။
ကဲ ကဲ.. လိုချင်သောသူများ လူရစေ။
အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်။ ။ မစွံသေးသူများ စွံရ်ျ၊ စွံပြီးသူများ လူထပ်တိုးစေသတည်း။
ထပ်မံ ရှင်းလင်းချက် ။ ။ (ကလေးတိုးခြင်းအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်၊ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ထပ်မံ ထပ်မံ ကြိမ်ဖန်များစွာ အခါတလဲလဲ စွံခြင်းကို မရည်ရွယ်ပါ။ နောက်ထပ် တိုက် မဆောက်ပါရစေနှင့်)
အဆစ်ရှင်းလင်းချက်။ ။ လိုအပ်သော ဆုများ ထပ်မံတောင်းဆိုနိုင်သည် (ဂျီတိုက်နိုင်သည်)။ ပြည့်အောင် ဖြည့်ပေးနိုင်ရန် စာရင်းပေးရမည်။
General - Chinese New Year
နစ်သစ်မှ စရ်ျ ကံကောင်းခြင်း မင်္ဂလာရှိခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စီးပွားရေး၊ လူမှု့ ရေး၊ ပညာရေး နှင့် (အချစ်) တို့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ.
True - childhood
နယ်ကအကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်းမသိဘူး ရန်ကုန်က တခါက ဘ၀လေးများကို သိအောင် လှစ်ပြမယ်။
မနက်ခင်းရောက်တာနဲ့ဟောဒီက ပဲပြုတ်ဆိုတဲ့ အသံကြားရင် ရာပါအုန်းဆိုပြီး အိပ်ရာထဲက အော်ရတယ်။ (ပဲပြုတ်ဆီထမင်းကို အသက်၃နစ်- အသက်၉နစ်အထိ စားတာ တခြားဘာမှ ကျွေးလို့ မရဘူး။ အဲဒီလောက် အစွဲအလန်းကြီးတယ်။)
အိပ်ရာနိုးရင် ကြက်ဥမကျက်တကျက်ထဲ့ဖျော်ထားတဲ့ နွားနို့ တခွက်၊ ကိတ်မုန့် ၂လုံး (ဆလင်ဒါပုံ ၂လက္မပတ်လည် ၃လက္မအရှည် ကိတ်မုန့် ) ဟဲပြီးသကာလ အိမ်ရှေ့ မှာ ငုတ်တုတ်နဲ့ဝရန်ဒါမှာ စိုက်ထားတဲ့နှင်းဆီပင် အတယ်ရေလောင်းတာ ထိုင်ကြည့် ဘေးက လိုက်ကူ (အဟဲ လိုက်ဆေ့ာတာ)။ နောက် ငှက်ကလေးတွေကို ဆန်ကွဲကျွေးတာ ထိုင်ကြည့်။ နောက်ပိုင်း မုန့် ကျွဲသဲ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ အကြော်၊ နံပြား၊ အီကြာကွေးသည်တွေ အိမ်ရှေ့ ဖြတ်လျှောက်တာ ထိုင်ငေး။ နေ့ လည်ရောက်တော့ ကူဖီး၊ ရေခဲမုန့် အော်တဲ့ ဘာဘူကြီးလာခါနီးဆို အမေက အတင်းအိပ်ရာထဲ ၀င်အိပ်ခိုင်းတယ်။ တခါတလေ ဘာဘူကြီး အလာစောရင် အမေနဲ့တကျက်ကျက်၊ အော်ငိုရတာနဲ့အာခေါင်ခြစ်အော်ရတာနဲ့တခါနစ်ခါဘဲ စားဘူးတယ်။ မသန့် လို့ မစားနဲ့ ဆေးသကြားပါလို့ ချောင်းဆိုးမယ် လို့ အတယ်ပြောပြီး ကထဲက အမေလဲ သက်သာသွားတယ်။ အဖေ့စကား တခွန်းဆိုတခွန်း နားထောင်တယ်။
နောက် မုန့် စိမ်းပေါင်း၊ မုန့် ဦးဏှောက်၊ အကြော်စုံ၊ ပြောင်းဖူးပြုတ် ဈေးသည်တွေလာတယ်၊ ဂျီမကျဘူး ထိုင်ကြည့်တာဘဲ ရှိတယ်။ နဲနဲ နေစောင်းရင် ပဲကတ္တီပါပြုတ်သည်လာတယ်။ အိပ်နေတုန်းလာတဲ့ ဈေးသည်တွေတော့ မသိဘူး။ ညနေပိုင်းကျရင် နောင်နောင်နောင်တီးတဲ့ ဆီးသီးသည်၊ တို့ဖူးသုပ်သည်၊ တခါတလေ စမူဆာသုပ်ကုလားကြီးလာတယ်။ ဂျာနယ်ကြော် ဆိုတာ ကြွပ်ကြွနေတာဘဲ၊ မုန့်ဗိုင်းတောင့်၊ မုန့်လုံးကြီး၊သာကူ၊မုန့် ကြာစေ့ အင်း သူတို့တွေ ညှိထားရမယ် ထင်တယ်။ တခါတလေ ဒန်ရေချိုင့်လေး လက်ကဆွဲတဲ့ ဆီသည်လာတယ် ၊ အုန်းဆီကိုစားစရာမှတ်လို့စားချင်လို့ အော်ခေါ်ပြီးမှ မစားရဘဲ မေမေ့အတွက် ဖြစ်သွားတယ်။ နောက် မခေါ်တော့ဘူး ဟင်း ဒင်းကိုတော့
အိပ်ရာနိုးရင် မေမေ၀ယ်ထားတဲ့ လမ်းထိပ်က မုန့် ဟင်းခါးသည်က ၀ယ်လာတဲ့ (လ္ဘက်ရည်ဇွန်းနဲ့၅ဇွန်း တိတိပါသော) ၅၀ပြားတန် မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ သို့ မဟုတ် အိမ်နောက်ဖေးအိမ် က မုန့် ဟင်းခါးသည်ဆီက ငရုပ်ကောင်းမုန့် ဟင်းခါးစားတယ်။ ငရုတ်သီးမစားဘူး နံနံပင်မစားဘူး။
ညနေဘက်မှာတော့ ကလေးတွေ ဆော့တဲ့ အချိန်ရောက်ရင် တုန်ချမ် တုန်ချမ်နဲ့အလုံပိတ် ကားကိုတွန်းတဲ့ ကလေးရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရတယ်။ သေတ္တာလို အလုံပိတ်ကား အထဲမှာ ကားအလယ်နံရံ တံခါးပေါက် ကို မီးစလိုက်ထွန်းပြီး ကာတွန်း၊ ဟာသရုပ်ရှင် တပိုင်းတစ ပြတယ်။ ကားရဲ့ ဘေး နှစ်ဘက်နံရံ မှာထိုင်ကြည့်တဲ့ ကလေးတွေ အနဲဆုံး၁၀ယောက်ထဲက အီးမပေါက်ရင် ကံကောင်း။ ဆော့ထားလို့ ချွေးတွေ သံတွေ ဖုံတွေ သဲတွေ နှပ်တွေ နဲ့နံစော်နေတာဘဲ (ကိုယ်လဲတူတူဘဲ) ဒီကြားထဲ မအောင့်နိုင် တာတွေ ပါရင် ကဲ. . . . ၇မိနစ် ရုပ်ရှင်ပြီးမှ အပြင်ထွက်မှ လေကောင်း လေသန့် ရူတော့။ ရုပ်ရှင်က ကောင်းလို့ဇတ်လိုက်ကို အားပေးဖို့ လက်ခုပ်တီးပြီး ဟေးလုပ်ရတဲ့ အခါကျရင် မဟေး နိုင်ဘူး ၊ ဘာရမလဲ အပြင်ထွက်မှ ဟေးပေးလိုက်တယ။် အကြွေးမတင်အောင် အားပေးတယ်။
ပြီးရင် မြင်းစီးမလား၊ ရှောက်သီးသုပ်သည် ဘေးဝိုင်းပြီး ငေးမလား။ ပေါက်ဖော်ကြီးရောင်းတဲ့ ပဲပြား ၀က်သားပေါင်း ကို တော့ သူများစားတာ မြင်ဘူးတယ်။ အမေချက်တာနဲ့ တူတူဘဲ။ ဆိတ်မတွေ တအုပ်ကြီးဆွဲလာတဲ့ ကုလားကြီးဆီက တခါတလေ အမေ နွားနို့ ဝယ်တာ တွေ့ ဘူးတယ်။
ဆေးရောင်စုံ သကြားတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကြက်တူရွေးရုပ်၊ ငှက်ရုပ် လုပ်ပြီး ပီပီလဲမှုတ် စားလဲ စားလို့ ရတဲ့ ဈေးသည်ကို သဘောအကျဆုံး၊ မစားနဲ့ ဆိုလို့ ဒီအတိုင်းအလှကြည့်ထားတယ် ကြက်ဖရုပ်လေးဆို သိပ်လှတာ အစိမ်းရယ် အနီရယ် ရောလို့ပီပီမှုတ်ဖို့ ဘဲ ထားထားတယ်။
လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ လာရင် မပူဆာတတ်ဘူး။ အဖေပြောတဲ့ မသန့် လို့ မစားနဲ့ ဆိုတာ ၁၀တန်း အထိနားထောင်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဖုန်နဲတဲ့ သန့် တဲ့ ဆိုင်တွေ ပူပူနွေးနွေးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာသာ ၀ယ်ပြီး အိမ်ကျမှ စားတတ်တယ်။ များသောအားဖြင့် အမေ၀ယ်ထားတဲ့မုန့် ကလွဲပြီး ဘာမှ မပူဆာတတ်ဘူး။
ကိုစင်ကရုန်းရေးတဲ့ ဓါတ်ရှင် က ထွက်ပြေးသွားလို့ဖတ်မရတာနဲ့သတိတရဖြစ်သွားလို့ ဒီပို့ ရေးဖြစ်သွားတယ်
Status - Busy
လာရောက် အားပေးကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု.. အလုပ်အနဲငယ်များနေတာ တကြောင်း၊ စိတ်မပါသောကြောင့်တကြောင်း တပတ်လောက်တော့ စာမရေးဖြစ်ပါကြောင်း ခွင့်လွှတ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ် ပါသည်။
အရင်က အမိန့် စာတွေ ထုတ်ပြန်တာ မလိုက်နာခဲ့လို့အမိန့် မထုတ်ဘဲ အသာလေးနေနေတာ... အားနာလို့အခုလို ရေးပြရတာ (ရှက်သား).. အခု ရီမော စိတ်ကြည်နူးစရာ တွေ စုဆောင်းနေပါတယ်။ ဘလော့ကာများ ဓါတ်ပုံများ ပေးပို့ ကြပါ။ ရီစရာ ဖြစ်စရာပေ့ါနော်။ နံမည် မတပ်ဘဲ တူရာ စုပြီး တင်ပေးပါမယ် အမှတ်တရပေ့ါ